> Resource > Free > Top 5 Best Free MOV Video jaraya
Xaaladan of technology multimedia iyo qaababka ay dalbanayaan ayaa sameeyey user ka fikirto ugu fiican jaraya video oo ku salaysan qaab MOV video ah. Helitaanka video ah magaabay la yaab leh waa arrin hawl aad u dhib iyo hal gaadhi karo sida tartan la taaban karo oo kaliya gaawaarida ay qaar ka mid ah free video MOV jaraya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tirada jaraya video ay isticmaalaan kumanaan kun oo qof maalin kasta oo ay tahay arrin ay adag tahay in koobto hoos liiska jaraya MOV video galay kaliya ee ugu sareysa 5 video jaraya; laakiin qaar ka mid ah waxaa la siiyaa hoos ku qoran:
Avidemux aan u adeegay sidii magaabay video ah, laakiin waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in sida joiner video ah; waa sifooyinka utility miisaanka yar oo nidaamsan awood u isticmaala in ay si fudud u dooro qayb ka mid video, iska jar oo sidoo badbaadin kartaa file jira ama faylka cusub.
Free video magaabay waa mid ka mid ah qalabka video magaabay ugu cajiibsan in awood isticmaala si loo soo saaro ama jar qayb gaar ah oo wax video. File ayaa la badbaadin karaa qaab kala duwan ama la mid ah. Taageero magaabay video Free qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video MOV, M4V, AVI, wmv iyo qaar badan. Waxaa ku jira mid ka mid ah suuqa kala soo bandhigeen oo ay la socdaan fursadaha Xiisaha Leh.
Tageynaa files MOV weyn wax yar video files waxaa noo sahlay adeegsiga Video qalabeed. Tani waa ciyaar saaxiibtinimo Tifaftiraha online video hufan oo user in ogolaataa user ay u dhinto, eegis iyo ciyaaro video ah; qaasatan tayada file vide asalka iyo cute qayb gaar ah oo user saxda doonaya in ay jar ama Macdan foomka file video waaweyn.
Cute video magaabay waa xal sahlan marka user ee loo baahan yahay in laga jaro ama qayb ka saareen gaar ah ka file video ah; waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video AVI, MOV, FLV, wmv iyo in ka badan. Waxa uu leeyahay user interface saaxiibtinimo in aan loo baahnayn wax aqoon dheeraad ah si ay u edit iyo jaray video ah.
VSDC Free Video Editor waa editor a video free laakiin tayo leh kaas oo ka yimaadaa kala duwan ee qaababka. Waxa ay taageertaa noocyada kala duwan ee videos sida MKV, FLV, Mpg, MP4, wmv, VOB, DAT, AVI, DIVX ,, MOV, iwm .. waxaa Iyadoo, goynta iyo videos MOV qaybsama noqon kartaa fudud.
Haddii aad u baahan tahay MOV video magaabay ah xirfad dheeraad ah, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Ayaa shaqada goynta video awood badan kuu ogolaanaya in aad si fudud u jaray video files yeela Goosimo kala duwan. Ka sokow in, shaqo la ogaado goobta dhisay-in si fudud video jari karaa xitaa ka sii badan si hufan.